Ubomi obuxelwe ngabapapi kwiNeanderthal
Iya kuba ngengxoxo exelela ubomi ... Kuba enye into kukuba i-breams iyabizwa njengabangeneleli abakhohlakeleyo kububuyatha obucacileyo bokujonga kwabo, kwaye enye into kukuba sidibana namadoda amabini, abambelele ngesandla, bazimisele ukuthetha ngobunzulu okanye ngokungapheliyo kweepropathi zabo zabucala.
Ukusuka kolu luvo olunokubonakala entlokweni yethu ukusuka kwisihloko, siza kwincwadi ehlala ihleli UJuan Jose Millas, Ingcali yokucinezela ulwimi kunye namacebo ngokufanayo ukusivusa kulungelelwaniso olusikelelweyo olunakho ukubonelela nge-lucidity kunye ne-humor ngendlela efanayo.
Eli xesha kuphela uhamba noMillás, UJuan Luis Arsuaga Ingcali kwiifosili kunye noncwadi lwakhe olugqithisileyo olunamathele ematyeni. Yiyo loo nto i-Neanderthal Sapiens ubuso ngobuso, iiklabhu emhlabeni kunye nentando entsha yokuqonda into eyenzekileyo kule millennia idlulileyo ebusweni bale planethi ...
Iminyaka, umdla wokuqonda ubomi, imvelaphi yabo kunye nokuziphendukela kwemvelo kuyabonakala entlokweni kaJuan José Millás, ke ngoko waqala ukudibana, kunye nenye yeengcali ezinkulu kweli lizwe ebaleni, uJuan Luis Arsuaga, kutheni sinje kwaye yintoni esikhokelele kwindawo esikuyo.
Ubulumko be paleontologist budityanisiwe kule ncwadi kunye nobuntu kunye nembono yobuqu neyothusayo umbhali anayo ngokwenyani. Kuba iMillás yiNeanderthal (okanye utsho njalo), kwaye uArsuaga, emehlweni akhe, sapiens.
Ke, ekuhambeni kweenyanga ezininzi, aba babini batyelele iindawo ezahlukeneyo, uninzi lwazo ziindawo eziqhelekileyo zobomi bethu bemihla ngemihla, kunye nezinye, iindawo ezizodwa apho usenokubona khona intsalela yento esasiyiyo, yendawo esivela kuyo.
Kolu hambo, olunokukhumbuza umfundi ngezo zikaDon Quixote noSancho, abaphengululi bazama ukufundisa abantu baseNeanderthal indlela yokucinga njengee-sapiens kwaye, ngaphezulu kwayo yonke loo nto, imbali ayisiyonto yakudala: iinyawo zobuntu yemillennium inokufumaneka naphi na ukusuka emqolombeni okanye kumhlaba obala ukuya kwindawo yokudlala okanye kwivenkile yezilwanyana egxunyekweyo. Bubomi obubethayo kule ncwadi. Amabali amnandi kakhulu.
Ungayithenga ngoku incwadi «Ubomi obuxelwe ngabapapi eNeanderthal», nguJuan José Millás, apha:
Iilebula UJuan Jose Millás, UJuan Luis Arsuaga, Iincwadi zangoku, Iincwadi zesayensi